FIJALIANA ANY ATSIMO SY NY EZAKA VITA: Haseho an-tsary
ACTUALITE/ Developpement/ SANTE/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA Ichiro Ogasawara, japon, Michel Saint-Lot, unicef	0 Commentaire déc 8, 2018
Nanomboka omaly 7 desambra ary hifarana ny 11 desambra 2018 ny fampirantiana ireo sary mitantara ny fahasarotana mianjady amin’ireo mponina Atsimo momba ny rano sy fahasalamana. Misokatra ho an’ny rehetra ity fampirantiana izay atao eny la City Ivandry ity. Ankoatra ny fampahafantarana ny olana sedrain’ireo mponina marefo dia mampiseho ny asa vitan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ankizy (UNICEF) izay notohanan’ny governemanta japoney ihany koa ity hetsika fampirantiana ity. Afa-po tamin’ny vokatry ny tetikasa ny ambasadaoron’ny Japon miasa eto Madagasikara, Ichiro Ogasawara. Nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny hetsika ny 7 desambra 2018 lasa, nilaza izy fa taratry ny asa vitan’ny UNICEF sy ny governemanta japoney amin’ny fanampiana ny governemanta malagasy momba ny famatsian-drano sy tohana ho an’ny fahasalamana any amin’ny faritra Atsimo ity fampirantiana ity.
Raha tsiahivina, nanampy ara-bola ny UNICEF ho fanatsarana ny fiainan’ny mponina marefo any Atsimo i Japon. Vola mitentina 285.000 dolara no nomeny ny volana martsa 2017 ho fanampiana ireo olona miaina ao anaty ny kere miisa 1.1 tapitrisa. Nankasitraka ny fanampian’i Japon ny solontenan’ny UNICEF eto Madagasikara, Michel Saint-Lot. Nahitam-bokatra ny asa niarahan’ny roa tonta natao tany Atsimo sy ireo distrika valo misitraka ny famatsiam-bola avy amin’i Japon. Noho io tetikasa io, nisy ny vokatra tsara toy ny fametrahana paompin-drano ka afaka misitraka rano fisotro madio sy akaiky ireo mponina, ny fampidirana paompin-drano any anaty sekoly. Ankehitriny, olona miisa 300.000 misitraka rano fisotro madio noho ireo foto-drafitr’asa ireo. Tsy ho ela, mponina 40.000 hisitraka rano fisotro madio ihany koa. Nahazo fampitaovana fanadiovana ihany ireo tobim-pahasalamana (CSBII) ary tokantrano 12.750 nomena tapakila hahazoana rano fisotro madio ilaina amin’ny andavanandro.
‹ TAOM-PANDROTSAHANA ZANA-TRONDRO: Zava-dehibe ny fanajana ny tetiandro	› FORUM AFRICA 2018 : Une plus grande intégration économique